हाई ब्लड प्रेसर भएको ब्यक्त्तीले के खाने ? के नखाने ? एकपल्ट सबैले हेरेर सक्दो सेयर गर्नुस् । - Sainokhabar
होमपेज / स्वास्थ्य / हाई ब्लड प्रेसर भएको ब्यक्त्तीले के खाने ? के नखाने ? एकपल्ट सबैले हेरेर सक्दो सेयर गर्नुस् ।
हाई ब्लड प्रेसर भएको ब्यक्त्तीले के खाने ? के नखाने ? एकपल्ट सबैले हेरेर सक्दो सेयर गर्नुस् ।
– ओमेगा थ्री वाला चिज, जस्तो कि ओखर, बदाम, माछाको तेल, आदि खानुस् । दैनिक पाँचरसात दाना बदाम र ३र४ वटा ओखर अवश्य खानुस् ।
– – पैक्ड या फ्रोजन आइटम नखानुस् । यसमा प्रिजरभेटिभ हुनुको साथै नुन पनि ज्यादा हुन्छ । यसैगरी बेकरी आइटम्समा सैचुरेटिड फैट ज्यादा हुन्छ । चिप्स, बिस्कुट, भुजिया, कुकीज, फर्कोजन मटर, केक, पेस्ट्री आदिबाट बच्नुस् ।
नोटः बीपी कन्ट्रोल गर्नमा डायटको रोल ५० प्रतिशत रहन्छ । स्ट्रेस मैनेजमेन्ट र एक्सरसाइजबाट बाँकी फाईदा प्राप्त हुन्छ । योगासन, प्राणायाम र मेडिटेशन गर्नुस् । भ्रामरी प्राणायाम खासमा फाईदाजनक रहन्छ ।
– यदि टेन्शन हदभन्दा ज्यादा हुदैछ भने कुनै मनोवैज्ञानिकसंग सल्लाह लिनुस् । यी साधारण कुरालाई ध्यानमा राख्नु भयो भने तपाई सुखी र स्वस्थ जीवन जीउन सक्नु हुन्छ ।–डेल्ली गोर्खाली